မောင်ဇော်ချစ်သော ဆရာမ - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ကျွန်တော့် မျက်နှာ တစ်ခုလုံး ရေနွေးပူနဲ့ အပက်ခံလိုက်ရသလို ထူပူသွားပါသည်။ သွားပြီ… သွားပြီ၊ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိတော့တာနဲ့ ခေါင်းကြီးကိုသာ ငုံ့ထားလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဘေးနားက ကုလားမြင့်အောင် ကလွဲပြီး အတန်းထဲက လူတွေ ဘယ်သူမှတော့ သိလိုက်ပုံ မပေါ်ဘူး။ အားလုံးက ထမင်းစားချိန်ဆိုတော့ သူ့ဟာသူ ရှုပ်နေကြတာလေ။
ကျွန်တော်နဲ့ မြင့်အောင် ညနေ ကျောင်းဆင်းချိန် အမှီပြန်ပေးရမှာမို့ ဒီစာအုပ်ကို သဲကြီးမဲကြီး ကုန်းဖတ်နေကြတာ။ ဘာ စာအုပ်ရမှာလဲဗျ… ကျွန်တော်တို့လို သွေးကြွခါစ ကောင်တွေရဲ့ အသည်းစွဲ မြန်မာအော (xxx blue) စာအုပ်ပေါ့။ အခုမှ စဖတ်လို့ သုံးလေးမျက်နှာပဲ ရှိသေးတယ်။ ဖျတ်ခနဲ လက်ထဲက ဆွဲလုခံလိုက်ရလို့ ဘယ်ကောင်လဲဟဆိုပြီး ကောမလို့ မော့ကြည့်လိုက်တော့မှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၉ တန်း (D) အတန်းပိုင်ဆိုလဲဟုတ် ၊ကျူရှင်ဆရာမဆိုလဲဟုတ်တဲ့ ဆရာမ ဒေါ်မမလေး ဖြစ်နေတယ်။
သေပြီပေါ့ဗျာ… ကျွန်တော်တို့နှစ်ကောင် ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ လက်ထဲက ခိုးဖတ်နေတဲ့ အောစာအုပ်ကို ဆရာမ မိသွားပြီဆိုတဲ့ အသိက တက်ခါစ ဖီလင်လေးတွေတောင် ပျောက်ကုန်တယ်။ တော်သေးတယ်ဗျာ… ဆရာမက စာအုပ်ကို သိမ်းပြီး ဘာမှမပြောပဲ ထွက်သွားလို့။
ဒါပေမယ့် တချိန်လုံး စိတ်ထဲမှာ ဒီစာအုပ်ကိစ္စကို ဆရာမ ဘယ်လို အရေးယူ အပြစ်ပေးမလဲ ဆိုတာကိုပဲ တွေးပူနေမိတော့ တာပါပဲ။ ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ ညနေပိုင်း နံပါတ်-၆ စာသင်ချိန်ဟာ ဒေါ်မမလေးရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအချိန် ဖြစ်နေပါတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ အချိန်တွေကို အားရဝမ်းသာ စောင့်နေလေ့ ရှိပါတယ်။ စာအသင်ကောင်းလို့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ..။ အခုမှ နှာသွေးကြွစ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဆရာမရဲ့ အပြကောင်းလွန်းလို့ပါ။
ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာ အတန်းထဲဘက်ကို ကျော
ပေးပြီး စာရေးနေပြီဆိုရင် တဆတ်ဆတ် တုန်နေတဲ့ ဆရာမရဲ့ တင်သားကြီး နှစ်ဘက်ကို အားရပါးရ ကြည့်ရလို့လေ။ အတန်းထဲက အပျိူဖြစ်ခါစ ကောင်မတွေရဲ့ ဖင်တွေနဲ့ တခြားစီပေါ့ဗျာ။ ဒီကောင်မတွေက ဒါတောင် ပဲက ပေးချင်သေးတယ်။ သူတို့ဖင် နံပြားတွေနဲ့များ…. ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပြရင်တောင် လီးတောင်ပါ့မလား မသိဘူး။
ဆရာမရဲ့ ဂျောကြီးကတော့ ရှယ်ပေါ့ဗျာ။ ပြည့်ကားတင်းထွား အသည်းယားစရာကြီးပေါ့။ အခုတော့အဲဒီတင်ကားကားကြီးကို ခိုးတောင် မကြည့်ရဲ လောက်အောင် စိတ်တွေ မလုံမလဲ ဖြစ်နေရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ကုလားမြင့်အောင်က လေသံတိုးတိုးနဲ့၊
“ ဟေ့ကောင် မောင်ဇော်၊ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ … ဆရာမက ဘာမှလဲ မပြောသေးဘူးကွ။ ”
“ အေး ငါလည်း အဲဒါပဲ တွေးနေတာကွ… စောက်ပြဿနာပဲ။ ”
“ ငါက အရေးမကြီးသေးဘူး မောင်ဇော်…. မင်းက ညနေ ကျူရှင်ရှိတယ် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ”
“ သိဘူးကွာ ညစ်တယ်။ ”
“ဟိုနှစ်ကောင် ဘာမရှင်းလို့လဲ…. ဆရာမကို မေးလေ။ ”
“အာ ဟို ရှင်းပါတယ် ရှင်းပါတယ် ဆရာမ။ ”
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ကောင် ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်က စာတွေကိုသာ အသိလက်လွတ် ကူးရေးနေလိုက်ပါတော့တယ်။ ဆရာမက စာသင်ချိန် ပြီးတော့ အခန်းထဲက မထွက်ခင်ကျွန်တော့်ကို လှမ်းခေါ်ပါတယ်။ ရင်တထိတ်ထိတ် နဲ့ ဆရာမ အနားရောက်သွားတော့မှ ဆရာမက ခပ်တိုးတိုးနဲ့၊
“ မောင်ဇော်…. ညနေကျရင် ဆရာမကိုစောင့်ပါ။အမှတ်ခြစ်စရာတွေ အိမ်ကိုပြန်သယ်ရမှာ နဲနဲလေးနေလို့။ ”
“ သြော်… ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ။ ”
“ အေးအေး စိတ်တွေနော် စိတ်တွေ…. ဟင်းဟင်း။ ”
ဟူး …. လေပူတွေ မှုတ်ပြီး သက်ပြင်းချ လိုက်ရပါသည်။ ဆရာကြီး ရုံးခန်းလိုက်ခဲ့လို့များ ပြောပြီလား ဆိုပြီး လန့်သွားတာပဲ။ တော်သေးတာပေါ့ …. ကျောင်းဆင်းရင် ဆရာမအိမ်ကို ကျူရှင်လိုက်သင်ရတာလေ။ ခါတိုင်းလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အရင်မပြန်နှင့်ပဲ ဆရာမကို စောင့်ပြီး စာအုပ်တွေ ကူသယ်ပေးဖို့ပဲပြောတာ။ အင်း အခြေအနေကတော့ ထင်သလောက် မဆိုးနိုင်ဘူး ထင်ရတာပဲ။
ညနေ ကျောင်းဆင်းတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူမလိုက်သွားတော့ပဲ ကျောင်းရှေ့ အုတ်ခုံမှာ ထိုင်ပြီး ဆရာမကို စောင့်နေလိုက်ပါတယ်။ ခဏနေတော့ လက်ဆွဲခြင်းတဖက် အမှတ်ခြစ်စရာ စာအုပ်တွေ ထည့်ထားတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တဖက်နဲ့ ဆရာမ ထွက်လာပါတယ်။ ကမန်းကတန်း အဲဒီကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကြီးကို ပြေးဆွဲလိုက်တာပေါ့….။ ကိုယ်က အပြစ်ရှိသူ မဟုတ်လား။
“ ပေး ပေး ဆရာမ….. ကျွန်တော် ဒါကြီး သယ်ခဲ့မယ်။ ”
“ အေးအေး… မောင်ဇော် နဲနဲတော့ လေးတယ်နော်။ လာလာ နောက်ကျနေမယ်… သွားရအောင်။ ”
ပြောရင်းနဲ့ ရှေကအရင်ထွက်သွားတဲ့ ဆရာမနောက်ကို စာအုပ်ထုပ်ကြီးဆွဲပြီး အပြေးလိုက်ရပါတယ်။ ရှေ့နောက် ၂ ပေလောက်ပဲကွာပြီး လျှောက်နေတာမို့ ခပ်သုတ်သုတ် လျှောက်နေတဲ့ ဆရာမရဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ စည်းချက်ညီညီ လိုက်ပြီး ခါရမ်းနေတဲ့ တင်ပါးကြီးနှစ်လုံးကို မစားရဝခမန်း ကြည့်နေရပါတယ်။ ကျောင်းစိမ်းထမီအောက်က ကော့ပြန်တက်နေတဲ့ ဖင်ကြီးနှစ်လုံး နိမ်းတုံမြင့်တုံ တုန်ခါနေတာကိုကြည့်ရင်း စိတ်ကူးနဲ့ အကိုင်ခံရတိုင်းသာ ပဲ့ပဲ့သွားမယ်ဆိုရင် အခုလောက်ဆို ဆရာမမှာ ထိုင်ဖို့တောင် တင်ပါးရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လို နှာထစ ကောင်တွေ ဂွင်းလေးများ စိမ်ပြေနပြေ တိုက်တတ်လာပြီဆိုရင်… အတွေးထဲမှာ ကိုယ်ဘာသာ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ တွေးယူပြီး ဂွင်းထုကြတာ မဟုတ်လား။ ဖာလည်းသွားမချရဲ.. အောကားကလည်း ဆန္ဒရှိတိုင်း ကြည့်ဖို့ကမလွယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်မျက်စိထဲ စွဲနေတဲ့ ဆော်ကို အာရုံထဲမှာ ခေါ်ပြီး စိတ်ကူးနဲ့ လိုးတတ်ကြတာလေ။
ကျွန်တော်တို့အရွယ် အများစုကတော့ ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်ရာ နေ့စဉ်ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်တွေထဲကမှ ကိုယ်သဘောကျရာ မိန်းမတစ်ယောက်ယောက်ကို မှန်းပြီး ဂွင်းထု အာသာဖြေလေ့ရှိတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော်လည်း ညတိုင်း ဆရာမကို စိတ်ကူးနဲ့ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး ဂွင်းထုနေကြမို့ပါ။ ဆရာမက ကျွန်တော့်ရဲ့ ဂွင်းမော်ဒယ် ပေါ့ဗျာ။
“ ဟိုကောင်လေး… ဘာတွေ တွေးနေတာလဲ။ ဟိုမှာ ကားလာပြီ… မြန်မြန်။ ”
“အာ ဟုတ် ဟုတ်။ ”
တွေးရင်းနဲ့ လျှောက်လာလိုက်တာ ကားမှတ်တိုင်ကို ဘယ်လိုရောက်နေမှန်းတောင် မသိဘူး။ ဘာတွေ တွေးနေတာလဲတဲ့… ဆရာမက။
ဝေါကနဲ ထိုးရပ်လိုက်တဲ့ ဟိုင်းလပ်ကား နောက်ခန်းကို ဆရာမနဲ့ ကျွန်တော် အပြေးကလေး တက်လိုက်ပါတယ်။ လူတောင် နေရာမရသေး
ခင် ကားက အုန်းကနဲ ဆောင့်ထွက်လိုက်တော့မှ စောက်ကျိုးနဲ အနေအထားနဲ့ ဆရာမနဲ့ ကျွန်တော် ဒီကားပေါ် ပါလာတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ထိုင်ခုံနေရာလွတ် မရှိတော့တဲ့ ဟိုင်းလပ်ကားရဲ့ ခြေနင်းခုံပေါ်မှာ ဆရာမက ခြေတဘက်ထောက်ပြီး အမိုးကိုင်းက လက်တန်းကို ကိုင်ကာ ကုန်းကုန်းကွကွ ကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီကုန်းကုန်းကြီး ဖြစ်နေတဲ့ ဆရာမရဲ့ အနောက်တည့်တည့်မှာ လက်တဘက်က အမိုးကိုင်းကိုဆွဲပြီး ကျန်တဲ့တဘက်က စာအုပ်ထုပ်ကြီးကို ဆွဲထားလျက် ပါလာပါတယ်။
ငြိမ်ငြိမ်လေး ရပ်နေရတာဆို အကြောင်း မဟုတ်ဘူးလေ။ ခုဟာက သူ့ထက်ငါ အလုအယက် မောင်းနေတဲ့ လိုင်းကားပေါ်မှာ မဟုတ်လား။ ကားစထွက်လိုက်ပြီ ဆိုရင်ပဲ အကြောင်းက ပေါ်လာပြီလေ။ အရှိန်လေးနဲ့ ဝေါကနဲ အထွက်မှာ ကျွန်တော့်ကိုယ်လုံးက နောက်ကို တစ်ချက်ယိုင်သွားပြီး ရှေ့ကို အုန်းကနဲ ပြေးဆောင့်တော့တာပဲ။ ရှေ့မှာ ရှိနေတာက အုတ်နံရံကြီးဆိုလဲ အကြောင်းမရှိသေးဘူး။ မသကာ နဲနဲပါးပါး နာယုံပဲ။ ခုဟာက ရှေ့မှာရှိနေတာက ဆရာမရဲ့ ဖင်ကြီးလေ…။ အဲဒီဖင်ကားကားကြီးကို ပြေးဆောင့်မိမှတော့ အကြောင်းရှိပြီပေါ့။
ဘာမှလုပ်လို့ မရတဲ့ အခြေအနေမှာ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှမလုပ်ပဲ နေနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ပုဆိုးထဲက အကောင်ကတော့ ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူး။ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲမှာ ချက်ချင်းပဲ ရုန်းကန်ကြီးထွား လာပါတယ်။ အဲဒီထက်ပိုပြီး အခြေအနေ မဆိုးလာအောင် သတိထားပြီး နေပေမယ့် မောင်းချင်သလို မောင်းနေတဲ့ လိုင်းကားပေါ်မှာ ကျွန်တော်လီးက ရှေ့က ကုန်းနေတဲ့ ဆရာမဖင်ကားကားကြီးကို ပြေးဆောင့်လိုက်၊ ဆရာမဖင်ကြီးက ကျွန်တော့်လီးဆီ ပြေးဝင်လာလိုက်နဲ့ လီးနဲ့ဖင် စိန်ပြေးတမ်း ကစားနေရပါတယ်။
ကားပေါ်က လူတွေကလည်း ဂိတ်ဆုံးထိများစီးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြလား မသိဘူး တစ်ယောက်မှ တုတ်တုတ်မလှုပ်ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက် ဆင်းသွားလို့ ဆရာမထိုင်ဖို့နေရာ ရသွားရင် ဒီအနေအထားက လွတ်လမ်းမြင်သေးတယ်။ ခုတော့ အဲဒီဖင်ကြီးကို မတော်တဆ ဆောင့်မိနေရာကနေ အရသာတွေ့ပြီး တမင်တကာကို ပြေးပြေးဆောင့်ချင်နေမိပါပြီ။
လူပျိုဖြစ်ပြီး နှာသာထလာခဲ့တာ… မိန်းမတွေနဲ့ ပွတ်သီးပွတ်သပ် နေခဲ့ဘူးတာမှ မဟုတ်တာ။ ခုလို အရှင်လတ်လတ်ကြီး တောင်နေတဲ့လီးနဲ့ ဆရာမဖင်ကြီးကို မထိတထိ ဆောင့်နေရတဲ့ အရသာဟာ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ မဟာစည်းစိမ်ပါပဲ။ ဖင်သားကြီးတွေကလဲ အိနေတာပဲ။ တခါတခါ ပြေးကပ်နေရာကနေ ချက်ချင်းပြန်မကွာသေးပဲ အသားချင်းပွတ်ပြီး ဖိဆွဲသလို ဖြစ်ပြီးမှ ပြန်ကွာသွားချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲ ဗုံးအလုံးတစ်ရာလောက် စုပြုံပေါက်ကွဲသွားသလား ထင်ရအောင်ကို တုန်ခါကျန်နေခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလောက်တင်းမာနေတဲ့ လီးတံမှာတောင် ဆရာမဖင်ကြီးတွေရဲ့ နူးညံ့မှုကို ခံစားနေရရင် ဆရာမကရော သူ့ဖင်ကို လာလာဆောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးရဲ့ မာကျောတောင့်တင်းနေမှုကို သိများနေမလား။ ဒါပေမယ့် ဆရာမက ပုံစံမပျက် ဖင်ကုန်းထားလျက်ပဲ ငြိမ်နေတာမို့ ကျွန်တော်လည်း တချက်တချက် မသိမသာ ဆောင့်လိုက် တခါတခါ သိသိသာသာဆောင့်လိုက် လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။
ကားစပယ်ယာ ခင်မျာလဲ တစ်စီးလုံး ဖင်သေတွေချည်းပဲ ပါလာလို့ စိတ်ညစ်နေပုံရပါတယ်။ မြေနီကုန်းမှာ မီးပွိုင့်မိနေတုန်း ရှေ့မှတ်တိုင်တွေ အကုန်မေးနေပါတယ်။ ဆွဲထားရတဲ့ စာအုပ်ထုပ်ကြီးကြောင့် လက်အံသေနေတာကိုတောင် အခုမှသိတယ်… တကယ်တကယ် အာရုံက အဲဒီဖင်ကြီး
ပေါ်မှာပဲ ရှိနေတာ။ စာအုပ်ကို လက်ပြောင်းပြီး ဆွဲလိုက်တုန်း စပယ်ယာက မှတ်တိုင် အမေးမှာ
“ သုခ ပါလား …….. သုခ ။ ”
“ ပါတယ် သုခ။ ”
ဆိုပြီး ဒေါ်မမလေး ဖြေလိုက်သံ ကြားရပါတယ်။ ကောင်းရောဗျာ ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ ဆင်းမယ့်လူကို မရှိဘူး။ မီးပွိုင့်စိမ်းသွားတော့ ကားကဒေါနဲ့
မောနဲ့ ဆောင့်အထွက်မှာ ပြည့်ကားတင်းထွားလှတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ဖင်ကြီးကို အားပါးတရ ဖိဆောင့်ချလိုက်မိပါတယ်။ ခါးကိုကော့ပြီး ပိုပိုသာသာ
လေး ဆောင့်ထည့်လိုက်တာမို့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးကြီးတောင် ဆတ်ခနဲ ကားထဲကို ပြေးဝင်သွားပါတယ်။ လုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်လိုက်ပြီးကာ
မှ ဒီလောက်သိသိသာသာကြီး ဖင်ကိုအဆောင့်ခံလိုက်ရတာကို ရိပ်မိလောက်တယ်လို့လဲ ပြန်တွေးမိကာ ထူပူလာပြန်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း သိတယ်.. ပုဆိုးထဲက လီးက တော်ရုံတန်ရုံ တင်းနေတာ မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ အရသာထူးတွေ တွေ့နေတာမို့ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲကနေ ထိုးထွက်တော့မလောက် ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီလောက် တောင့်တင်းနေတဲ့ လီးနဲ့ ဖင်ကို အထိုးခံနေရတာတောင် တစ်ချက်မှ ပုံစံမပျက်ပဲ နေနေတဲ့ ဒေါ်မမလေးကိုလဲ အံ့သြလာပါတယ်။
“ ဖင်ကြီးက အတုကြီးများလား မသိဘူး ”
အဲဒီလို တွေးမိတာနဲ့အတူ မျက်စိကပါ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ဖင်ကြီးကို ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ ဟောဗျာ… ကျောင်းစိမ်းထမီ ဖင်အောက်ဘက်လောက်မှာ ကျပ်စေ့လောက်ရှိတဲ့ ရေစိုကွက်လေးပါလား။ သိလိုက်ပါပြီ.. မောင်ဇော်လည်း အဲဒီလောက် မညံ့ပါဘူးလေ။ ဒီအခြေဒီအနေမှာ ဒီအကွက်က ဘယ်ကအရည်စိုတာလဲဆိုတာ တန်းသိလိုက်ပါပြီ။
ဘယ့်နှယ် နောက်ကနေ တရစပ် လီးနဲ့ထိုးနေတာကို ငြိမ်လှချည်လားလို့ ထင်နေတာ လတ်စသတ်တော့ ဒေါ်မမလေးတစ်ယောက် စောက်ပတ်ထဲက အရည်ကျလောက်အောင် ဖီလင်ယူနေတာကိုး။ နို့မို့ဆိုလည်း ဒီထမီပေါ်မှာ စောက်ရည်တွေစိုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဟာသူ ဖင်ကြားထဲကနေ စီးသွားမှာပါ။ အခုဟာက ကျွန်တော်က လီးနဲ့ ပြေးပြေးဆောင့်နေတော့ ထမီစကပါ ဖင်ကြားထဲ ရောက်ရောက်သွားပြီး စောက်ရည်ကြည်တွေက ထမီပေါ်မှာပါ လာစိုနေတော့တာပေါ့။
မှတ်တိုင်မှာ ကားရပ်လိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံး လွယ်အိတ်ကို ရှေ့ကို ပြောင်းလွယ်လိုက်ရတာပဲ။ နို့မို့ဆို လမ်းလျှောက်ရင် ပေါင်ကြားက ကောင်က ငေါထွက်နေမှာလေ။ ကားလမ်းကို ခပ်သွက်သွက် ကူးလိုက်ပြီး ဒေါ်မမလေးနဲ့ မျက်နှာချင်း မဆိုင်ရအောင် ရှေ့ကနေ လမ်းထဲကို အရင်ဝင်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်ထုံးစံအတိုင်း ရုံးဆင်း ကျောင်းဆင်းချိန်မို့ ဒေါ်မမလေးတို့ လမ်းထဲမှာ စည်ကားနေပါပြီ။ ရှေ့ကနေ ဟိုငေးဒီငေးနဲ့ လျှောက်လာပြီးမှ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ထမီပေါ်က အစိုကွက်ကို သတိရလိုက်ပါတယ်။ သူ့ဟာသူတောင် ဖင်မှာကွက်နေတာ သိပါ့မလားလို့။ ဒီအတိုင်း ဖင်မှာအကွက်ကြီးနဲ့ တလမ်းလုံး လျှောက်လာရင် မြင်တဲ့လူတွေ အကုန် ဟားကြမှာ။
ဟာ… ငါပြောလိုက်ရင်လည်း ကားပေါ်မှာ ဖြစ်ကြတာတွေအတွက် ရှက်နေရမှာ။ မပြောပဲ နေလိုက်တာ ကောင်းမလား။ ဘာလုပ်ရကောင်းမလဲ တွေးပြီးမှ နောက်ဆုံးပြောလိုက်လို့ ရှက်ရတာက ငါ့ကိုပဲရှက်ရမှာ၊ မပြောပဲထားလိုက်ရင် လမ်းထဲက လူတွေ အကုန်ကို ရှက်ရမှာဆိုပြီး ရှေ့ကနေ ခဏရပ်စောင့်နေလိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းကြီးငုံ့ပြီး လျှောက်လာနေတဲ့ ဒေါ်မမလေးကို သေသေချာချာပဲ ရပ်ပြီး ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။
အသားအရည်ကတော့ ပုံမှန်ခပ်လတ်လတ် အသားအရည်ပါပဲ၊ ချောသလားဆိုတော့လဲ အဲလိုချောတာမျိုး မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် တောင့်တင်းဖွံ့ထွားတာလေးပဲ ထူးခြားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက် လောလောဆယ်မှာ ဒေါ်မမလေးကလွဲပြီး ဘယ်မိန်းမကမှ မျက်စိထဲမှာ ကြည့်လို့ကောင်းတာ မရှိပါဘူး။
“ ဆ ဆရာမ ။ ဟို ဟိုလေ။ ”
ဘေးနားက လိုက်လျှောက်ပြီး ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောမလို့ ပြင်ကာမှ ဒေါ်မမလေးက မျက်နှာချင်းဆိုင် ပြန်အကြည့်မှာ ရင်တွေတုန်ပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိ ဖြစ်ကာ ရုတ်တရက် ဆွံ့အသွားရပြန်ပါတယ်။
“ ဟဲ့… ကောင်လေး ပြောလေ ဘာတုန်း။ ”
“ အဲ.. ဟိုလေ.. ဆရာမ… ဆရာမ ဖင်… အာ.. ဟိုဟို နောက်မှာ ကွက်နေတယ်။ အဲဒါ…. ”
ပြောပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော် နောက်လှည့်မကြည့်တော့ပဲ သုတ်ခြေတင်တော့တာပဲ။ ဒေါ်မမလေးတို့ တိုက်ခန်းအောက်ကို ရောက်တော့ တခြား ကျူရှင်တူတူတက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက လှေကားအုတ်ခုံမှာထိုင်ပြီး အာလူးဖုတ်တဲ့လူဖုတ်၊ မုန့်စားတဲ့လူက စားနေကြပြီ။ ကျွန်တော်က စာအုပ်ထုပ်ကြီးဆွဲပြီး ရောက်လာတာမြင်တော့ ဝိုင်းအာကြတယ်။
“ ဟေ့ကောင်… မောင်ဇော် သိပ်မဖားနဲ့ကွာ။ အဆင့်တစ်လဲ မင်းရမှာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ ”
“ အေးလေ… မောင်ဇော်တို့က သိပ်သိသာနေပြီ။ ဆရာမဆီက ဘာစားချင်လို့လဲဟေ့။ ”
“ ငဖားကြီးဟေ့ ဟားဟား ။ ”
ဝိုင်းဟားနေကြတဲ့ အကောင်တွေ ကောင်မတွေကို မျက်လုံးပြူး လျှာထုတ်ပြပြီး ပြန်နောက်လိုက်ပါတယ်။ လက်ထဲက စာအုပ်ထုပ်ကြီးကို အုတ်ခုံပေါ် ဘုန်းကနဲ ပစ်ချလိုက်ပြီး
“ ဟေ့ကောင်တွေ… တံခါးဖွင့်ထားပြီးပြီလား။ ”
“ အေးအေး .. ဖွင့်ထားပြီးပြီ။ ”
“ပြီးရော ငါ ဒီအထုပ်ကြီး သွားထားလိုက်ဦးမယ်။”
ကျူရှင်ရှိတဲ့နေ့ဆို ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကို ဒေါ်မမလေးက အိမ်သော့ ပေးလိုက်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်
တော်တို့က ကျောင်းဆင်းခေါင်းလောင်း ထိုးတာနဲ့ တခါတည်း ထွက်လာလို့ ရကြတာလေ။ ဆရာမ ကတော့ ကျောင်းကိစ္စတွေ ဘာတွေ ရှိတတ်တာမို့ နောက်ကျပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အရင်သွားနှင့်ပြီး လွယ်အိတ်တွေ ဘာတွေထား အဆာပြေ မုန့်တွေ ဘာတွေ စားထားရတာပေါ့။ ဆရာမက ကိုယ်ခွဲ မရှိဘူးလေ။
ဆရာမယောကျ်ားဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုလည်း ချိတ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံထဲမှာပဲ မြင်ဘူးပါတယ်။ ရှမ်းပြည်ဘက်မှာ တာဝန်ကျနေတယ်လို့တော့ ပြောတာပဲ။ ယူနီဖောင်းပေါ်က အပွင့်တွေ အခက်တွေတော့ ပါတယ်။ ဗိုလ်ကြီးလား ဗိုလ်မှူးလားတော့ မခွဲတတ်ဘူး။ ရုပ်ကတော့ အညာသားရုပ်ပဲ။
ကျွန်တော် စာအုပ်ထုပ်ကြီးကို ဧည့်ခန်းထဲမှာ ထားလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းဘက်ကို လျှောက်လာခဲ့ပတယ်။ တိုက်ခန်းဆိုတော့ အိမ်သာရေချိုးခန်းက တွဲလျက်လေ။ ခုတော့ ဒေါသတွေပြေပြီး ခပ်ပျော့ပျော့လေး ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်က ဆီးသွားလိုက်တော့ ပိုပြီးတောင် ပျော့ကျသွားသလိုပါပဲ။ ကိစ္စပြီးလို့ ရေချိုးခန်းတံခါးကို ဖွင့်မယ်အလုပ်မှာ အဝတ်လှမ်းတဲ့ ကြိုးတန်းဆီကို မျက်စိက ဘာရယ်မဟုတ် ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။ အတွင်းပစ္စည်းတွေ လှမ်းထားတာပါလား။ စကဒ်လိုဟာမျိုး တစ်ထည်နဲ့ ပင်တီအပြာလေး တစ်ထည်ပါ။ လျှော်ပြီး လှမ်းထားတာနဲ့ တူပါတယ်။
ကျွန်တော့်လက်က အပြာရောင် ပင်တီလေးကို အလိုလို လှမ်းယူလိုက်မိပါတယ်။ လက်ထဲမှာ ရောက်လာတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီအပြာရောင်လေးကို တယုတယ ကိုင်တွယ်နေရင်းက ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့မရတော့ပါဘူး။ စောစောက ညှိုးငယ်နေတဲ့ သကောင့်သားကလည်း အားမာန်အပြည့်နဲ့ ချက်ချင်းရုန်းကြွလာပြန်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးချွတ်ပြီး ကြိုးတန်းမှာ တင်လိုက်ပါတယ်။ လက်ကို တံတွေးနဲနဲဆွတ်ပြီး တောင့်တင်းနေတဲ့ လီးကို ရှေ့နောက်ဆွဲပြီး ဂွင်းထုဖို့ အစပျိုးလိုက်ပါတယ်။ တလမ်းလုံး ဆောင့်လာရတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ဖင်ကြီးကို ပြန်မြင်ယောင်ရင်း အဲဒီဖင်ကြီးမှာ ဝတ်တဲ့ဘောင်းဘီကို သေသေချာချာ ဖြန့်လိုက်ကာ ခွကြားနေရာကို ခပ်ဖွဖွ နမ်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်။
“ ဒီနေရာလေးက စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ အမြဲကပ်နေမယ့် နေရာပဲ။ ”
ဆပ်ပြာရနံ့သင်းနေတဲ့ ပန်တီခွကြားနေရာကို လျှာနဲ့မထိတထိ လျက်လိုက်တယ်။ စိတ်အာရုံထဲမှာတော့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို လျက်ပေးလိုက်ရသလိုပဲ ခံစားရပါတယ်။ အောက်မှာလည်း လက်က အဆက်မပြတ် ရှေ့တိုးနောက်ငင် ဂွင်းတိုက်ပေးနေတာမို့ လီးတံထိပ်က ဒစ်ကြီးကလဲ ဖူးကားရောင်ရမ်းလို့နေပါပြီ။ တသက်လုံး ဂွင်းထုခဲ့သမျှ ဒီတစ်ခါထုရတာ အရသာ အရှိဆုံးပါပဲ။
ရေချိုးခန်းနံရံကို မှီကာ ဒေါ်မမလေးရဲ့ အတွင်းခံပင်တီကို မျက်နှာကမခွာပဲ စိတ်ကူးယဉ်ချင်တိုင်းယဉ်ကာ စိတ်ရှိလက်ရှိ ထုနေရတာလေ။
“ အ…အ…ရှီး။ ”
“ ဟင်း….အ…အား။ ”
အသံတစ်ခုနဲ့အတူ ညာဘက်က ရေချိုးခန်းတံခါးက ပွင့်သွားကာ တစ်ယောက်ယောက် ဝင်လာလိုက်တာကို မျက်စိထောင့်မှာ ရိပ်ကနဲ တွေ့လိုက်ရချိန်မှာ အရာအားလုံး နောက်ကျသွားပါပြီ။ တံခါးကို သေသေချာချာ ပိတ်ခဲ့မိရဲ့လား ၊ စေ့ရုံသာ စေ့ထားခဲ့မိသလားဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မတွေးတတ်တော့ပါဘူး။ အင်းလေ ဒီလိုလုပ်မိလိမ့်မယ်လို့လဲ ကိုယ်တိုင်တွေးမိခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ။ အခြေအနေက ပံ့ပိုးလို့ အခုလို ဖြစ်သွားရတာပါ။ ဒေါ်မမလေး အိမ်ထဲရောက်လာတဲ့ အသံကို လုံးဝကို မကြားခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တိုက်ပွဲက ပြင်းထန်နေတာကိုး။
အခုတော့ အောက်ပိုင်းဗလာကျင်းလျက် သူ့ရဲ့ အတွင်းခံ ပင်တီလေးကို မျက်နှာမှာအပ်ကာ ဂွင်းထုနေတဲ့ မောင်ဇော်ရဲ့ အဖြစ်ကို ဒေါ်မမလေးတစ်ယောက် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံလိုက်ရပါပြီ။
“ မောင်ဇော်… မင်း ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။ အဲဒါ… ဆရာမ ဘောင်းဘီ မဟုတ်လား။ အခု ပုဆိုးမြန်မြန်ပြန်ဝတ်စမ်း… အောက်ကဟာကိုလဲ ကြည့်ဦး။ ”
ဒေါ်မမလေးကသာ ဇယ်ဆက်သလို ပြောနေပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောတော့ပါ။ ဒီလိုထိတောင် ဖြစ်လာမှ ရွေးစရာလမ်း မရှိတော့ဘူးလို့ပဲ ခံယူလိုက်ပြီလေ။ ရှေ့ဆက်တိုးရုံပဲ ရှိတော့တာပေါ့။ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွကြားက ထုလက်စမို့ တောင်
မတ်နေတဲ့ လီးကိုကြည့်ကာ ပုဆိုးပြန်ဝတ်ခိုင်းနေတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ လက်ဖဝါးနှစ်ဘက်လုံးကို ဖျက်ခနဲဆွဲကာ ကျွန်တော့်လီးတံပေါ်မှာ ဖိကပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်မို့ ဒေါ်မမလေးတစ်ယောက် ဘာမှမတုန့်ပြန်နိုင်ခင်မှာ ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုကို ပိုပြီးနီးကပ်သွား
အောင် တိုးလိုက်တော့ ဒေါ်မမလေးကို ရေချိုးခန်းထောင့်မှာ ပိတ်ထားလိုက်သလိုပါ ဖြစ်သွားပါတယ်။ လောလောလတ်လတ် စိတ်တွေထကြွထားကြတဲ့သူ နှစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ရှူသံတွေက ရေချိုးခန်းထဲမှာ ပြင်းထန် ဆူညံလာပါတယ်။
“ ဆရာမ… ကျွန်တော်… ကျွန်တော် မရတော့ဘူးဗျာ။ ကြည့်ပါဦး ဆရာမရယ်။ လီးတစ်ချောင်းလုံး အရမ်းတောင်နေပြီ။ ဆရာမဖင်ကို တလမ်းလုံး ဆောင့်လာခဲ့တာလေ အခု မနေနိုင်တော့ဘူး။ အရမ်းလုပ်ချင်နေပြီ။ ”
“ မောင်ဇော်… မင်း… မင်း… ပုဆိုးပြန်ဝတ်ပါဆိုနေတာကို… ဒီကလေးနဲ့တော့ ခက်ကုန်ပါပြီ။ ”
ဒေါ်မမလေး တုန်ယင်စွာနဲ့ မောင်ဇော့်ကို ပုဆိုးပြန်ဝတ်ဖို့ပဲ ပြောနေပေမယ့် လက်နှစ်ဘက်ကတော့ မောင်ဇော်ရဲ့ လီးတံကို တင်းကြပ်စွာ ဆုပ်ညစ်ထားပါတယ်။ ဒေါ်မမလေးက ဆုပ်ကိုင်ဖြစ်ညှစ်ထားချိန်မှာ မောင်ဇော်ရဲ့ ခါးအောက်ပိုင်းက အလိုလို ကော့လိုက် ကုန်းလိုက် လုပ်ပေးနေမိတာမို့ ဂွင်းထုပေးတာခံနေရသလိုပါပဲ။ စိတ်ရှိလက်ရှိ ဖြစ်ညှစ်ထားတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ လက်ထဲကို လီးတံတစ်ချောင်းလုံး ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် လုပ်နေရင်း စိတ်တွေတအားပါလာကာ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးပြည့်ပြည့်ကြီးကို ဆွဲဖက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒေါ်မမလေးရဲ့ လက်နှစ်ဘက်က လီးတံကို ဆုပ်ကိုင်ထားချိန်မှာ ကျွန်တော်က သိုင်းဖက်လိုက်တာမို့ လက်တွေကို ရုန်းမရအောင် ချုပ်ပြီးသား ပုံစံ ဖြစ်သွားပါတယ်။ နူးညံ့တဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရဲ့ အတွေ့အထိနဲ့ ကိုယ်ရနံ့ကို တစ်ခါမှ ဒီလောက်ရင်းရင်းနှီးနှီး မကြုံခဲ့ဖူးတာကလဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရမ္မက်ရှိန်ကို တရိပ်ရိပ် တိုးစေပါတယ်။ ကျွန်တော့် အထင်တော့ ကျွန်တော်ရော ဒေါ်မမလေးပါ နှစ်ယောက်လုံး နတ်ပူးသလို တုန်ခါနေကြတယ်လို့ ခံစားနေရပါတယ်။
“ မလုပ်ပါနဲ့ကွာ… မဖြစ်ပါဘူး။ မောင်ဇော်… လွှတ်ပါ ဆရာမကို။ ဟိုမှာ… တခြားကလေးတွေ တက်လာတော့မယ်လေ။ ”
ပါးစပ်ကသာ လွှတ်ပါတကဲကဲ လုပ်နေပြီး လက်တွေက လီးတံကို မလွှတ်တမ်း ကိုင်ထားတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ လည်ပင်းတဝိုက်ကို ခပ်ဖွဖွ လိုက်နမ်းနေတုန်းမှာ ဒေါ်မမလေးက စိုးရိမ်စွာ ပြောလာပါတယ်။ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ကျောပြင်ကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေက အောက်ကို ဖြေးဖြေးချင်း လျှောချလာပါတယ်။ ခါးအထက်ပိုင်းလောက်ဆီကို အရောက်မှာ ဒေါ်မမလေးရဲ့ မျက်နှာကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး ခါးအောက်ကနေ မို့မောက်ကားထွက်နေတဲ့ ဖင်သားတွေကို ဆတ်ခနဲ ဆွဲကိုင်ကာ ဆီးခုံချင်း ပူးကပ်သွားအောင် ဆွဲယူလိုက်မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေါ်မမလေးက လီးတံကို ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲမို့ ဆီးခုံချင်း မပူးကပ်တော့ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒစ်ဖျားကသာ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ဆီးစပ်ကို ထိုးမိသွားပါတယ်။ အရေပြားချင်း ပွတ်တာဆို ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် အခုဟာက ဒေါ်မမလေးရဲ့ ထမီစကို ဖိပွတ်မိသွားတာလေ။ ကားပေါ်မှာတုန်းကတော့ ကိုယ်ကလည်း ပုဆိုးနဲ့ အောက်ကလည်း ဘောင်းဘီ ပါသေး
တာဆိုတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ အခုက ကိုယ်က အလွတ်ကြီးဆိုတော့ ပူကနဲဖြစ်ပြီး ဒစ်ဖျားတစ်ခုလုံး ကျိန်းစပ်သွားတာပဲ။
“ အ..အ…။ ”
“ ဟင်…ဘာ… ဘာဖြစ်လို့လဲ …။ ”
“ အား… ကျွတ်.. ကျွတ်… ထမီကို ပွတ်ဆွဲသလို ဖြစ်သွားတာ.. ကျင်သွားလို့။ ”
နေရင်းထိုင်ရင်း ကျွန်တော် ထအော်လိုက်တာမို့ ဒေါ်မမလေးတောင် လန့်သွားတယ်ထင်တယ်။ တချိန်လုံး လီးကို ကိုင်ထားတဲ့ လက်တွေကို အလန့်တကြား လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အကြောတွေ ထောင်နေအောင် တင်းမာနေတဲ့ လီးထိပ်က ကျိန်းစပ်နေတဲ့ ဒစ်ဖျားကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်ကိုင်ကြည့်ပြိး ဆုပ်လိုက်ဖြေလိုက် လုပ်ပေးနေတုန်း ဒေါ်မမလေးရဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ အပြုအမူကို ကြုံတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
“ ဟင်း ဘာအခုမှ တော်တော်နာနေတာလဲ… ဒီလောက် သောင်းကျန်းနေတာကို နည်းတောင်နည်းသေးတယ်။ ”
“ ပျစ် ။ ”
ပြောရင်းနဲ့ သူ့လက်ဝါးကို ပါးစပ်နားတေ့ကာ လက်ထဲကို တံတွေးနဲနဲ ထွေးလိုက်ပြီး၊ အဲဒီတံတွေးတွေကို ကျွန်တော့်လီးတံမှာ သုတ်ကာ ဖြေးဖြေးချင်း လီးကို ဆွဲကစားပေးပါတယ်။ နာနေတာတောင် ပြန်မေ့သွားပြီး လီးကို အလိုက်သင့် ကော့ပေးထားမိပါတယ်။ လီးတစ်ချောင်းလုံး နီရဲ လာအောင် အရသာတွေ့နေချိန်မှာ အခုလို ဂွင်းထုပေးနေတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာလည်း အရည်တွေ ဘယ်လောက်ရွှဲနေမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ချင်ပါတယ်။
“ နာသေးလား…အခု ။ ”
“ အ.. အ.. အား မနာတော့ဘူး… အရမ်းကောင်းတာပဲ ဆရာမရယ်။ ”
“ ပြစ်..ပြစ် ..ဗျစ် ။”
“နှာဗူးလေး… မြန်မြန်ပြီးတော့ …. အောက်ကနေ တက်လာကျတော့မယ်။ ”
“အ.. အား ရှီး… ကောင်းလိုက်တာ… သွက်သွက်လေး လုပ်ပေးပါ ဆရာမရယ်။ ”
“အင်း..လာ ဒီလိုနေ။ ”
မျက်နှာချင်းဆိုင် ထုပေးနေတာမို့ ပုံစံမကျတဲ့ အနေအထားကို ဒေါ်မမလေးက ပြောင်းပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဆွဲလှည့်ပြီး သူ့ရင်ဘတ်ထဲထည့်ကာ နောက်ကနေ လှမ်းပြီး ထုပေးတဲ့ အခါမှာတော့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ လက်တွေက ခုနကထက်ပိုပြီး သွက်သွက်လက်လက် လှုပ်ရှားလို့ ရသွားတယ်။ အားနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်နှစ်ဘက်ကိုလည်း ဒေါ်မမလေးရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို နောက်ပြန်ကိုင်ကာ စိတ်ရှိလက်ရှိ ကိုင်တွယ်နေလိုက်ပါတယ်။
တရစပ် ဂွင်းထုပေးရင်းက ကျွန်တော့် နားရွက်နား ကပ်ကာ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တဲ့ စကားသံကို အကြားမှာ တကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေတောင် ထသွားတယ်။
“ မင်း… ဆရာမကို သိပ်လိုးချင်နေလားဟင်။ ”
“ အ..အ..ဗျာ။ ”
“ကျူရှင်ပြီးရင် မပြန်နဲ့နော်။ ဆရာမနဲ့ မင်းနဲ့ လိုးကြရအောင်ကွာ။ ”
“အား…. အီး… အ…. ပြီးတော့မယ်… ဆရာမ…. အ အ ထုပေး ထုပေးပါ။ ”
“ ပျစ် ပျစ် ။”
ဒေါ်မမလေးက ဂွင်းထုပေးရင်း ပြောလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေကြောင့် စိတ်ခံစားမှုတွေက ပိုပြီး မြန်ဆန်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်ခါးကို ကော့နိုင်သလောက် ကော့ပေးထားသလို ဒေါ်မမလေးကလည်း လီးတံကြီးကို အားထည့်ပြီးညစ်ကာ ဆက်တိုက် ထုပေးနေတယ်။
အသက်ကို အောင့်ထားကာ လီးတံထိပ် ဒစ်ဖျားကနေ တကိုယ်လုံး ကျင်နေအောင် တလိပ်လိပ်တက်လာတဲ့ ကာမအရသာကို အားပါးတရ ခံစားရင်း သုတ်ရည်တွေကို ရေချိုးခန်း ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပန်းချလိုက်ပါတော့တယ်။ တကိုယ်လုံး နုံးချည့်ကာ ယိုင်နဲ့နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ထူမတ်ပေးရင်း ဒေါ်မမလေးက ပြုံးစိစိကြီးလုပ်ကာ
“ဟင်း… မြန်လိုက်တဲ့ ကိုယ်တော်လေး။ ကိုယ့်ဟာတွေကို ရေလောင်းပြီး ဆေးခဲ့ဦးနော်… ဟင်းဟင်း။ ”
ပြောပြီးတော့ သူ့လက်တွေကို ရေဆေးကာ ထွက်သွားတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကို ကြည့်ကာ သက်ပြင်းချလိုက်မိပါတယ်။ ဒီအချိန်လေး ၁၀ မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်သွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ပါဘူးလေ။ တန်းပေါ်က ပုဆိုးကို ပြန်ယူကာ ဝတ်လိုက်ပြီး စောစောက ပန်းထုတ်ထားတဲ့ ဒေါသတွေကို ရေဆေးချပြီးမှ ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။
အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ဟိုကောင်တွေ အသင့်ပြင်ထားပြီးကြတဲ့ စားပွဲဝိုင်းမှာ ဝင်ထိုင်ပြီး အရှိန်မသေသေးတဲ့ အရသာကို မျက်လုံးမှိတ်ကာ ဇိမ်ယူနေလိုက်တယ်။ ဒေါ်မမလေးကတော့ အိပ်ခန်းထဲ ဝင်သွားပြီး အဝတ်အစားလဲနေတယ် ထင်ပါတယ်။ ကျူရှင်ပြီးရင်ဆိုတဲ့ အတွေးက ဝင်လာပြန်တော့ ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ် ခုန်လာပါတယ်။ ဘယ်လိုစပြီး ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ တွေးကြည့်နေတုန်း အောက်ကကောင်တွေ ဆူဆူညံညံနဲ့ ဝင်လာကြပါတယ်။
“ အေး.. ငါ့အိမ်က ပိုက်ဆံမပေးသေးဘူးကွ။ ရရင်တော့ ငါလည်းဝယ်မှာ။ ”
“မဟုတ်ဘူးလေဟယ်.. ဟိုကြေငြာမှာ ဝတ်သွားတဲ့ ဒီဇိုင်းကိုပြောတာ ငါက။ ”
“အေး ဟေ့ကောင်.. မင်းအဲဒီ သီချင်း ကော့ဒ်ရှိရင် ငါ့ကိုပေးဦး။”
တစ်ယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ ဘာတွေပြောနေကြမှန်း မသိအောင် ဆူညံစွာ ရောက်လာကြပြီး အလျိုလျို ထမင်းစားပွဲဝိုင်း ၂ ဝိုင်းမှာ နေရာယူနေကြချိန်မှာ ဒေါ်မမလေးလည်း အခန်းထဲက ထွက်လာပါတယ်။ တီရှပ်ပွပွနဲ့ ကရင်ထမီလိုလို ရှမ်းထမီလိုလို တိုင်း
ရင်းသားအဆင် ထမီတစ်ထည်ကို တွဲပြီး သာမန်သာ ဝတ်ထားပေမယ့် ကျွန်တော့် အမြင်မှာ တော်တော်ကြီးကို လှနေပါတယ်။
“ကဲကဲ အားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် စရအောင်။ ”
“သင်္ချာ (၁) သင်မယ် ဒီနေ့။ ”
စာအုပ်ထုတ်ဆိုလို့သာ ထုတ်ထားရတယ် စာထဲမှာ ကျွန်တော့် အာရုံတွေ လုံးဝရှိမနေပါဘူး။ ရှင်းပြနေတဲ့ အသံတွေ ပြန်မေးနေတဲ့ အသံတွေကလည်း ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်ပါပဲ။ ချထားတဲ့ စာအုပ်ကို ငုံ့ကြည့်နေရင်း ဒေါ်မမလေးကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လုပ်ရမလဲ ဆိုတာတွေကိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်နေမိပါတော့တယ်။ ငါ လူပျိုရည် ပျက်တော့မှာပါလား ဆိုတဲ့ အသိကလဲ ရှက်သလိုလို ပီတိဖြစ်နေသလိုလို ခံစားရစေပါတယ်။
အင်းလေ… ကြေးစားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ကာမဆက်ဆံပြီး လူပျိုရည် ပျက်ရတာထက်စာရင် အခုလို ကိုယ်တကယ် တပ်မက်စွဲလမ်းရတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဆီမှာ လူပျိုရည် အပျက်ခံလိုက်ရတာကို ကျေနပ်မိတာ အမှန်ပါပဲ။ ပြီးတော့ အဲဒီအချိန်ကျရင် စိတ်ကူးထဲမှာ အခါအခါမြင်ယောင် မှန်းဆခဲ့ရဖူးတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း မြင်ခွင့်ရပြီလေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လူပျိုရည်ကို သောက်သုံးမယ့် ဒေါ်မမလေးရဲ့ ပေါင်ကြားက အချစ်ပန်းပွင့်ကြီးကရော ဘယ်လိုပုံများ ရှိနေမလဲ။ မဆုံးနိုင်တဲ့ အတွေးတွေ အမျိုးမျိုးတွေးနေတာ ဘယ်လောက်တောင် ကြာသွားလဲ မသိဘူး။ ဘေးကကောင်တွေ စာအုပ်တွေ သိမ်းဆည်းနေမှ စာသင်လို့ ပြီးသွားတာ သိပါတယ်။
အားလုံးကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျူရှင်ပြီးတာနဲ့ လစ်ဖို့ ပြင်နေကြပြီ။ ကျွန်တော့်မှာသာ နောက်ဆက်တွဲ သင်ခန်းစာအတွက် ထပဲထရမလို ထိုင်ပဲထိုင်နေရမလို ဖြစ်နေတယ်။ အရေးထဲမှ ဘာမှမသိတဲ့ ဟိုအကောင်တွေက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖို့ ခေါ်နေသေးတယ်။ ခါတိုင်းလဲ ကျူရှင်ပြီးရင် ထိုင်နေကြပါ။ ဒီနေ့တော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖို့ ခေါ်တဲ့အကောင်တွေကို တော်တော် သောက်မြင်ကပ်သွားတယ်။
“ ဟေ့ကောင် လဒ… ထိုင်မှာလားလို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်။ ”
“ ဟေ.. အေးအေး ငါဒီနေ့ မထိုင်တော့ဘူးကွာ အိမ်က စောစောပြန်လာဖို့ မှာထားတယ်ကွ။ ”
“ အံမယ်.. မောင်ဇော်… ဒီနေ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တောင် မထိုင်တော့ဘူးပေါ့ ဟုတ်လား။ ”
“ ဗျာ… ဟုတ် ဟုတ်တယ် ဆရာမ.. ဟို.. အိမ်မှာ ကိစ္စလေးရှိလို့ပါ။ ”
“အေးအေး လိမ္မာတယ် အိမ်ကို တန်းတန်းမတ်မတ် ပြန်နော်။”
“ ဟုတ်ကဲ့.. ပြန်မှာပါ။ ”
ဟိုကောင်တွေ ခေါ်နေတာကို အတင်းငြင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒေါ်မမလေးကလည်း ဝင်ပြီး စနေပြန်ပါတယ်။ အိမ်ကို တန်းတန်းမတ်မတ် ပြန်နော်တဲ့.. ဟားဟား။ အားလုံး လွယ်အိတ်ကိုယ်စီဆွဲကာ ထွက်နေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်ပဲ ယောင်လည်လည်လုပ်ပြီး ဟိုဟာပျောက်သလိုလို.. ဒီဟာပျောက်သလိုလိုနဲ့ ထိုင်ရာက မထသေးတာ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဒေါ်မမလေးကလည်း ပြုံးစိစိနဲ့ တစ်ချက်ကြည့်ပြီး မီးဖိုခန်းဘက်ကို ထသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ချက်ချင်း အကြံရပြီး နောက်က ထလိုက်သွားတယ်။
“ အေးအေး ဟေ့ကောင်တွေ သွားနှင့်ကြကွာ… ငါ ရေသောက်ပြီးမှ လိုက်လာခဲ့မယ်။ ”
ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ တမင်အားလုံးကြားအောင်အော်ပြီး မီးဖိုခန်းထဲ ဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။ အထဲရောက်တော့ ဒေါ်မမလေးကလည်း သောက်ရေအိုးနားမှာ ရပ်စောင့်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုမှန်းမသိတဲ့ အပြုံးနဲ့ ပြုံးပြီး ကြည့်နေပြန်ပါတယ်။
“ ကိုယ်တော်လေး.. အိမ်ရောက်အောင် ပြန်နော်.. ဟုတ်ပြီလား။ ခစ်..ခစ် ။ ”
“ အာ… မဟုတ်ပါဘူး.. ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ ပြောလိုက်တာပါ။ ”
“ ဟွန်း…သိပါ့ သိပါ့။ ပြာယာကိုခတ်နေတာပဲ.. တခါထဲ။ ”
“ အခုပြန်မဆင်းလို့မှ မရတာ.. ဆရာမရဲ့ ။ သူတို့ သိကုန်မှာပေါ့။ ”
“ အေးပါ… သွား… လိုက်ဆင်းသွားလိုက်။ ပြီးရင်.. ဟိုဘက်လမ်းဘက်ကနေ ပြန်ပတ်ပြီး တက်လာခဲ့… ဟုတ်ပလား။ ”
“ အာ..အင်းအင်း။ ”
“ ဟေ့ သိပ်လဲ အမြန်ကြီး တက်မလာနဲ့နော်… ကျွန်မ ရေလေးဘာလေး ချိုးပါရစေဦး။ သွားသွား..။”
အင်း ဟုတ်သားပဲ။ အခုခပ်တည်တည်နဲ့ လိုက်ဆင်းသွားပြီးမှ ဟိုဘက်လမ်းကနေ ပြန်ပတ်လာခဲ့လို့ ရတာပဲ။ မိန်းမဉာဏ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာနေမှာ။ ကျွန်တော်ကတော့ မွှန်နေတာနဲ့ ဘာမှမတွေးတတ်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒေါ်မမလေးက ရေတောင် ချိုးထားဦးမယ် ဆိုပါလား။ ဒီလိုနဲ့ပဲ နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ နှစ်ယောက်သုံးယောက်နဲ့ ရောပြီး အောက်ကို ဆင်းလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။
” လောကကြီးမှာ လင်ယောင်္ကျားနဲ့ ခဏတဖြုတ်လောက်လေး ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဒါမျိုးအစားကောင်းလေးတွေနဲ့လည်း စားရကံ ကြုံဆုံကြတတ်ပါတယ်။ ဖြစ်တတ်တဲ့ လောကသဘာဝပါပဲလေ။ ခိုးစားရတဲ့ အရသာက ဘာနဲ့မှမတူတာ အမှန်ပါပဲ။”
လို့ ဒေါ်မမလေးက ရေချိုးနေရင်း ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဖြေတွေးလေးတွေးရင်း ပြုံးလိုက်မိတယ်။
လမ်းထိပ်ကို ရောက်တော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ စနစ်တကျ နေရာယူပြီး ထိုင်နေကြတဲ့ ကောင်တွေက လှမ်းခေါ်ကြပြန်ပါတယ်။ စနစ်တကျ နေရာယူတယ်ဆိုတာက ဆိုင်ရှေ့က ဖြတ်သွားသမျှ စော်တွေကို မျက်စိတဆုံးလဲ ကြည့်နိုင်ရမယ်၊ အချင်းချင်းလဲ မြင်ကွင်းကို ပိတ်တာကွယ်တာမျိုးလဲ မရှိရအောင် ထိုင်ကြတာကို ပြောတာပါ။ အင်း အချိန်နဲနဲ ဖြုန်းရမယ်ဆိုတော့လဲ ခဏလောက် ဝင်ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုပြီး ဆိုင်ထဲ ဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။
“ အေးလာလာ မောင်ဇော်… မင်းထိုင်ဦးမလို့လား ပြန်မယ်ဆို။ ”
“ ဆေးလိပ်လေး သောက်လိုက်ဦးမယ်ကွာ.. အိမ်ရောက်ရင် သောက်လို့ မရတော့ဘူးကွ။ ”
ပြောရင်းနဲ့ ခွေးခြေပုတစ်လုံးယူကာ ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး စားပွဲပေါ်က LONDON တစ်လိပ်ကို မီးညှိကာ ဖွာနေလိုက်ပါတယ်။ မီးခိုးငွေ့များကို အရှိုက်ထဲရောက်အောင် ရှူသွင်းပြီးမှ ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်မှုတ်ထုတ်ကာ စီးကရက်ကို အရသာခံ သောက်နေတုန်းမှာ..
“ မောင်ဇော်… နေ့ခင်းက မင်းတို့ဆီက အောစာအုပ် မိလို့ဆို..။ ”
“ဟာ.. မင်းကို ဘယ်သူပြောလဲ။ ”
“ ဟိုကောင် ကုလားပြောတာလေ… မလေးရှားကိုယ်တိုင် မိတာဆို ။ ”
“ မဟုတ်ပါဘူးကွာ… အဲဒီကောင် ကုလား လျှောက်ဖွနေတာ.. မလေးရှားမိတာဆို ငါဘယ်လို ကျူရှင် လာရဲမလဲကွ။ ”
“ အေးပေါ့ ဟေ့ကောင် အသစ်လေး ဘာလေး ရရင်လည်း ပေးဖတ်ဦးကွာ။ ”
“ ရရင် ပေးပါမယ်ကွာ မပူပါနဲ့။ ”
သောက်ကုလား.. ပါးစပ်ပေါက်က ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူး မင်သေသေနဲ့ ပိတ်ငြင်းထားလိုက်ရတယ်။ ဒေါ်မမလေးကို နောက်ကွယ်မှာ ကျောင်းသားတွေက မလေးရှားလို့ ခေါ်ကြတယ်လေ။ မမလေးဆိုတဲ့ နာမည်ကို ဖျက်ခေါ်ကြတာပါ။ အခုတော့ အဲဒီမလေးရှား အောစာအုပ်မိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက တော်တော် ပြန့်နေပြီလား မသိဘူး။ ကုလားကို ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ စွတ်ဖွာနေတဲ့ စီးကရက်က ဖင်စီခံနားထိ ကုန်နေပြီမို့ လွှင့်ပစ်လိုက်ကာ…
“ ကဲ.. ငါလိမ့်တော့မယ်ကွာ… အားလုံးပဲ။ ”
“ အိုကေ အိုကေ။ ”
“ အေးအေး… မနက်ဖြန်ကျ ရှစ်တန်းက ကောင်တွေနဲ့ ကန်ဖို့ ချိန်းပြီးပြီနော် ။ ”
“ အေးပါ ငါသိပါတယ်။ ဒိုးပြီကွာ။ ”
ကားမှတ်တိုင်ရှိရာဘက်ကို ထွက်ခဲ့ပြီး မှတ်တိုင်မှာ အရိပ်အခြေ ခဏကြည့်လိုက်တယ်။ အားလုံး ရှင်းနေတော့မှ မှတ်တိုင်ကိုကျော်ပြီး ဟိုဘက်လမ်းထဲကို ဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။ လမ်းအဆုံးကနေ ဒေါ်မမလေးတို့ လမ်းထဲကို ပြန်လျှောက်ဝင်လာခဲ့ချိန်မှာတော့ လမ်းမီးတိုင်တွေတောင် ထိန်ညီးနေပါပြီ။ အာ… ညခုနစ်နာရီခွဲလောက်တောင် ရှိနေပြီပဲ။ အချိန်ကို သတိထားမိတော့မှ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ဖို့ရာ သတိရတယ်။ ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းက ဘယ်အချိန်မှ ပြီးမယ်ဆိုတာ မသိတော့ ဖုန်းဆက်ထားမှပဲဆိုပြီး တွေ့တဲ့ စတိုးဆိုင်လေး တစ်ခုကနေ ဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဆရာမမွေးနေ့ အလှူရှိလို့ ဝိုင်းလုပ်ပေးနေပါတယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့ သေသေချာချာ ကူညီဖို့တောင် ပြန်မှာနေသေးတယ်။
အားလုံးအဆင်ပြေနေပြီမို့ ကျွန်တော့် ခြေလှမ်းတွေက ပေါ့ပါးလျင်မြန်စွာနဲ့ ဒေါ်မမလေး ရှိရာကို အပြေးတပိုင်း ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ လှေကားထစ်တွေကို ကျော်ခွပြီး ပြေးတက်လာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် အခန်းရှေ့ရောက်တော့ ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးကိုခေါက်ဖို့ ရင်တွေ တုန်နေပါတယ်။ မသိမသာ သက်ပြင်းလေးချပြီးမှ သစ်သားတံခါးကို ခပ်အုပ်အုပ်လေး ခေါက်လိုက်ပါတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် အခန်းက သတိထားမိသွားမှာ စိုးလို့ပါ။
“ ဒေါက် ဒေါက် ။ ”
“ ဂျောက်…ကျွီ ။ ”
ဖြေးဖြေးချင်း ပွင့်လာတဲ့ တံခါးကြားကနေ မြင်လိုက်ရတဲ့ ဒေါ်မမလေးကို ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့သူလို ငေးမိသွားပါတယ်။ ရေမခြောက်တခြောက် ဆံပင်ရှည်တွေကို ဖြန့်ချထားပြီး သနပ်ခါးကျဲကျဲလေး လိမ်းထားကာ ကပိုကရို လှနေတဲ့ ဒီလိုပုံမျိုးကို မြင်မှ မမြင်ဘူးခဲ့တာလေ။ ပြီးတော့ စပန့်သားလို့ ခေါ်မလား မသိဘူး အဲဒီလို ပျော့ပျော့ပါးပါး ဂါဝန်ရှည်လေးနဲ့ ရှိသမျှ ခန္ဓာကိုယ် အလှတွေကိုလည်း တမင်ပေါ်အောင် ဖော်ပြီး ဝတ်ထားသေးတယ်။ သာမန်လောက်ပဲရှိတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ နို့အုံနှစ်လုံးတောင်မှ ဒီညမှာ တော်တော်ထွားနေတယ်လို့ ထင်ရတယ်။
အိမ်ထဲ မရောက်သေးတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒေါ်မမလေးက ဆွဲခေါ်သွင်းလိုက်ပြီးတော့ အိမ်တံခါးကို ဂျက်ပါထိုးပြီး ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘာစလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိလို့ ဆက်တီပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ စွေ့ကနဲ ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ တကယ့် တကယ်တမ်း နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ကြတော့ အတွေ့အကြုံက စကားပြောပါပြီ။ ပြေးပဲဖက်ရမလား တက်ပဲခွရတော့မလား ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်တတ်တော့တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒေါ်မမလေးက အလိုက်သိစွာ လမ်းကြောင်းပြပေးနိုင်လို့သာ တော်ပါတော့တယ်။
“ရှင် အရင်စမှ ဆိုရင်တော့ ဒီည ဒီလိုပဲ ခုံပေါ်မှာ ထိုင်နေရတော့မှာ အသေအချာပဲ။ အိမ်ပြန်နောက်ကျလို့ ရရဲ့လား … မောင်ဇော်။ ”
“ ဟုတ်.. ဟုတ် ရတယ် ဖုန်းဆက်ထားပြီးပြီ။ ”
“ ဟုတ်လား… ဒါဆို အေးအေးဆေးဆေးပေါ့နော်။”
ခေါင်းညိတ်ပြီး ဖြေလိုက်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ပေါင်သားအချင်းချင်း ထိကပ်သွားအောင် ဒေါ်မမလေးက တိုးထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်တဘက်က ကျွန်တော့်ပခုံးကို ကျော်ပြီး ဖက်ကာ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ် အထက်ပိုင်း တစ်ခုလုံးကို သူ့ရင်ခွင်ထဲကို ဆွဲချလိုက်တယ်။ အလိုက်သင့်ကျသွားတဲ့ ကျွန်တော့် မျက်နှာကတော့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ နို့အုံသားကို ပါးနဲ့ကပ်ပြီးသား ဖြစ်နေပါပြီ။ နူးညံ့လွန်းတဲ့ အတွေ့အထိကြောင့် အောက်မှာ ဘော်လီတောင် ဝတ်မထားတာကို သိလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ပါးနဲ့ အဲဒီရင်သားအိအိကို လိုက်ပွတ်တော့တာပါပဲ။
ဒေါ်မမလေးကလည်း ပါးနဲ့ကပ်ပြီး နို့အုံကို ပွတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ ထိုးဖွကစားကာ ငြိမ်နေပါတယ်။ ပါးပြင်ကို တချက်တချက် လာလာထောက်တဲ့ မာတောင်တောင် နို့သီးခေါင်းလေးကို သွားနဲ့သာသာလေး ဖိကိုက်လိုက်တော့ ဒေါ်မမလေး ဆတ်ခနဲ တွန့်သွားကာ
“ ဟေ့… မကိုက်နဲ့လေကွာ.. ပြတ်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ”
“ အသည်းယားလို့… ကိုက်လိုက်တာ။ ”
“ ဟွန်း အသည်းပဲယားတာလား…။ ”
“ ဟင်း ဟင်း ။”
“ လာ..ဒီလိုလေးနေကွာ…၊။ ”
ဘေးတစောင်းကြီး မှီထားတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ခဏထခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ ဒေါ်မမလေးက အရင်ဆက်တီပေါ်မှာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်း ခုံပေါ်တင်ကာ ဒူးနှစ်ဘက်ကို ကားကားလေးထောင်ပြီး ထိုင်တယ်။ ဂါဝန်အောက်နားစက လွတ်သွားတာမို့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ဒူးအထက်နားလောက်ကနေ တင်ပါးရင်းထိ ဆင်းသွားတဲ့ ပေါင်လုံးကြီးတွေကို မြင်ရတဲ့ အခါမှာတော့ ကျွန်တော် ကတုန်ကရင်ကြီးဖြစ်ကာ ပုဆိုးထဲက ပစ္စည်းကလည်း ချက်ချင်း သိသိသာသာ သွေးတွေ တိုးလာပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့် လက်ကိုဆွဲပြီး အဲဒီဒူးနှစ်လုံးကြားမှာ နောက်ပြန်ဝင်ထိုင်ခိုင်းကာ အနောက်ကနေ ဖက်ထားပြီး သူ့ရင်ဘတ်ထဲကို ဆွဲသွင်းလိုက်ပြန်တယ်။ အဲဒီတော့ ဘေးကထောင်နေတဲ့ ဒူးနှစ်ဘက်က ဂါဝန်စတွေက အလိုလိုလျှောဆင်းသွားပြီး ပေါင်ရင်းမှာ သွားစုနေပါတယ်။ အသားသိပ်မဖြူပေမယ့် ပေါင်သားကြီး နှစ်လုံးကတော့ မီးရောင်အောက်မှာ ဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီးကို ပေါ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့် လက်နှစ်ဘက်ကို ဒူးထိပ်မှာ အသာတင်ပြီးမှ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ပေါင်သားတုတ်တုတ်တွေကို မရဲတရဲ ကိုင်တွယ်ကြည့်ပါတယ်။
“ ဟွန်း.. ကျောင်းက ပြန်လာတုန်းက သူများကို တလမ်းလုံး အနောက်က လုပ်လာတာ..။ ခုမင်းကို ပြန်လုပ်မယ်… ဟားဟား..။ ”
“…..ဟင်း..ဟင်း ။ ”
“ ပြစမ်းပါဦး… ဆရာမဖင်ကိုတောင် ထိုးချင်နေတဲ့ ဟာလေးကို…။ ”
ဒီအဆင့်ထိ ရောက်နေတာတောင် ကျွန်တော် ပြောမထွက်တဲ့ စကားမျိုးတွေကို ဒေါ်မမလေးက ပြောရဲနေတာ အိမ်ထောင်သည်မို့လားတော့ မသိဘူး။ သူတစ်တစ်ခွခွကြီးတွေ ပြောလိုက်တိုင်း ကြားရတဲ့ ကျွန်တော့်ရင်တွေ ပိုခုန်တာတော့ အမှန်ပဲ။ ပြောရင်းက ခပ်လျော့လျော့ ကျွန်တော့်ခါးပုံစကို ဖြေချလိုက်ကာ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲက ရုန်းကြွနေတဲ့
လီးကို အသာလေး ဆွဲထုတ်ပါတယ်။ ဘောင်းဘီထဲက ထွက်လာရလို့ အားရဝမ်းသာ တောင်မတ်နေတဲ့ လီးတံကို ဖြေးဖြေးချင်း အပေါ်အောက် ကစားပေးပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်ဖင်တွေ ခုံပေါ်ကနေ ကြွကြွတက်သွားတဲ့အထိ အရသာတွေ့အောင် စပြီး ထုပေးနေတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ပေါင်တွေကို ပွတ်နေတဲ့ လက်တွေကလည်း တဖြည်းဖြည်း ပေါင်ခွကြားဆီရောက်အောင် တိုးနေပါပြီ။ ပေါင်ရင်းနား ရောက်လာလေလေ အတွေ့အထိက ပိုပြီး နူးညံ့လာလေလေပါပဲ။
“ ဟင်း…အင်းး….အ ။ ”
“ ပြစ် ပြစ်…ဗျစ် ။ ”
“ ကောင်းလားဟင်…. ဆရာမ ထုပေးတာ ။ ”
“ အား….ဟ…ကောင်းတာပေါ့…။ ”
“ မမ…အဖုတ်ကြီးလည်း ယားနေပါပြီ ကလေးရယ်…။ ”
“ ဟင်…မမ..အား…။ ”
“ အင်းလေကွာ…. လိုးပဲလိုးတော့မယ်… ဆရာမလို့ ခေါ်တုန်းလား။ ”
“ အင်း…အင်း မမ ။ ”
သူ့ကိုယ်သူ မမလို့ပြောလာတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ လက်ထဲမှာ ကျွန်တော့်လီးတင်မကဘူး အောက်ကဥတွေပါ အရသာတွေ့နေပါပြီ။ ဥတွေကို ခပ်ဖွဖွနယ်ရင်း လီးကို တံတွေးတွေ ရွှဲနေအောင် ဆွတ်ကာ အထုခံနေရတာရော ဒေါ်မမလေးရဲ့ ပေါင်သားတွေကို ပွတ်နေရတာရော တစ်တစ်ခွခွကြီးတွေ ကြားနေရတာရောကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်တွေ အရမ်းကို ပြင်းထန်လာပါတယ်။
တဝက်တပျက်ပဲ ချွတ်ထားတဲ့ ပုဆိုးကို ကန်ထုတ်လိုက်ပြီး ဒေါ်မမလေးကို မှီထားရာကနေ ထကာ အပေါ်က အင်္ကျီကိုပါ ချွတ်ချလိုက်တော့ပါတယ်။ လီးတန်းလန်းကြီးနဲ့ ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြိး တခစ်ခစ်ရယ်နေတဲ့ ဒေါ်မမလေးကို လက်မောင်းရင်းနှစ်ဘက်ကနေ ဆွဲမပြီး ထခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
“ ဟဲ့ ဟဲ့… ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်းကွ… အင့် ။ ”
“ဟင်း ဟင်း ။ ”
“ ပြွတ်…ပြွတ်..။ ”
ကျွန်တော့်ရဲ့ အပြုအမူကို ဒေါ်မမလေး အံ့သြလို့ မဆုံးသေးခင်မှာ သူ့ရဲ့ ပါးနှစ်ဘက်ကိုဆွဲပြီး ထူအမ်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို စုပ်နမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့် လည်ပင်းကို ပြန်လည်သိုင်းဖက်ကာ အလိုက်သင့် နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်ပေးလာတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ဂါဝန်ကြီးက ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ အတားအဆီး ဖြစ်နေတာကို စိတ်မရှည်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် လိုးရတော့မယ့် ဒေါ်မမလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလည်း အခုထိ မမြင်ရသေးတာ မကျေနပ်ဘူး။
ဒေါ်မမလေးကတော့ ကျွန်တော့်လီးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်နေခဲ့သလောက် ကျွန်
တော်ကျတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကို မြင်တောင် မမြင်ရသေးဘူးလေ။ နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်နေရင်းက ကျွန်တော့် လက်တွေကို ဒေါ်မမလေးရဲ့ တင်ပါးကားကားကြီး နှစ်လုံးကို ဖြစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်ရင်း
“ ဟင်း…အင်း …ဘာ လဲ ။ ”
“ ဂါဝန်ကြီး မချွတ်သေးဘူးလား….ဟင်။ ”
“ သြော်…ချွတ်လေ..ကလေးချွတ်ပေး ။ ”
“ အင်း။ ”
နှစ်ယောက်သား ပူးကပ်နေတာကို ခွာလိုက်ပြီးတော့ ဒေါ်မမလေး လက်နှစ်ဘက်ကို မြှောက်ထားပေးပါတယ်။ ဂါဝန်အောက်နားစတွေကို လိပ်ယူပြီး ဆွဲတင်လာကာ ခေါင်းပေါ်ကနေ မပြီး ချွတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ကျွန်တော်ရော ဒေါ်မမလေးပါ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ကိုယ်လုံးတီးတွေ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော် သိပ်မြင်နေချင်တဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို သေသေချာချာ မတွေ့ရသေးပေမယ့် ဆီးစပ်မှာ အုံခဲနေတဲ့ စောက်မွှေးမဲမဲတွေကို မြင်တာနဲ့တင် လီးတံက တင်းသထက် တင်းလာပါတယ်။
ဒေါ်မမလေးက သူ့တကိုယ်လုံးကို အငမ်းမရ ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ထဲကို ပြန်ပြီးဝင်လာကာ အနမ်းတွေ ပေးပြန်ပါတယ်။ ဘာအတားအဆီးမှ မရှိတော့ပဲ အရေပြားချင်း ထိကပ် ပွတ်သပ်ရတဲ့ အခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ အသက်ရှူသံတွေက ပြင်းထန်သွားပါပြီ။
“ ဟင်း ဟင်း အား။ ”
“ဟ ဟား အင်း ။ ”
အဝတ်အစားကင်းမဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မမလေးကို ဖက်ထားရင်းက ကျွန်တော့်လက်ကို သူ့ပေါင်ခွကြားထဲကို ထိုးထည့်လိုက်တော့ အသာလေး ပေါင်တွေကို ဟပေးပါတယ်။ မို့မို့ဖောင်းဖောင်းနဲ့ နူးညံ့လွန်းလှတဲ့ အသားစိုင်တစ်ခုကို လက်ထဲမှာ အပြည့်စမ်းမိပါတယ်။
“ ဟင်း ဟင်း ဒါ မမဟာကြီးလားဟင်။ ”
“ အင်း…အ.. ကလေး…သိပ်လိုးချင်နေတဲ့ မမစောက်ပတ်ကြီးလေ။ ”
“ အ…အ..အား။ ”
“အရည်တွေ ဟ.. အ ရွှဲနေတာ တွေ့လား။ ”
“အင်း အရမ်းကိုင်လို့ကောင်းတာပဲ မမရယ်။ ”
“လီးကြီးနဲ့လိုးရင် ပိုတောင်ကောင်းဦးမှာ… ဟ ဟင် ဒီ ဒီလိုလေ…။ ”
“အ အ…အား မမ ၊။”
ကျွန်တော့်လီးကို ကိုင်ကာ ပေါင်ကိုကားလိုက်ပြီး ဒစ်နဲ့ ပေါင်ခွကြားကို တရကြမ်း ဆွဲတိုက်လိုက်တော့ ကျွန်တော် အသည်းခိုက်လောက်အောင် ကောင်းသွားပါတယ်။ စနက်တံကို မီးရှို့လိုက်သလို ဖြစ်သွားတာမို့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးကို ကြမ်းပြင်ပေါ် ပက်လက်ဆွဲ လှဲချလိုက်ကာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်း ကြားထဲကို ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။
အခုမှပဲ အမွှေးအုံ ကြားထဲက မို့ဖောင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို အသက်ရှူမေ့လောက်အောင် မြင်ရပါတော့တယ်။ တကယ်ကို ကြည့်လို့မဝပါဘူး။ အရည်ကြည်လေးတွေ စီးယိုပေကျံနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို လက်ညှိုးနဲ့ ဖွဖွလေး ပွတ်လိုက် လက်ဝါးကြီးနဲ့ အတင်းဆုပ်လိုက် လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒေါ်မမလေး ပြုံးပြီး ကြည့်နေပါတယ်။
“ မမ အဖုတ်ကြီး..အရမ်းလှတာပဲ မမရယ်။ ”
“ လှတော့ ဘာလုပ်ချင်လဲ…ပြော။ ”
“ လ..လိုးချင်တယ် မမ ရယ် ။ ”
“အင်း အ လိုးလေကွာ လိုးတော့ မမစောက်ပတ်ကလည်း အရမ်းအလိုးခံချင်နေပြီ။ ”
ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို မိုးပေါ်ထောင် ကားလိုက်ကာ စောက်ဖုတ်ကို လက်ဝါးနဲ့ ပွတ်ရိုက်ပြပြီး အလိုးခံချင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံ လုပ်ပြပါတယ်။ ကျွန်တော် ရှေ့ကို နဲနဲတိုးလိုက်ကာ လီးတံကို အချောင်းလိုက် စောက်ဖုတ်ကြီးပေါ် တင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အကွဲကြောင်း အလယ်လောက်မှာ လီးကိုတေ့ပြီး ဖိထိုးချလိုက်တယ်။ တောင့်တင်းနေတဲ့ လီးတံက ဒစ်မြုပ်ရုံလောက်ပဲ ဝင်တယ်။
အပေါက်နဲ့ လွဲနေတဲ့ လီးကို ဒေါ်မမလေးက ကိုင်ပြီး အပေါက်တည့်ပေးတော့မှ ကျွန်တော် ဖိထိုးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ပူနွေးစိုရွှဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို အိကနဲ တိုးဝင်သွားပါတော့တယ်။ ဒစ်ဖျားကနေ အရင်းထိအောင် ပူနွေးတဲ့ တွင်းလေးထဲ စိမ်လိုက်ရ
သလိုလို ဖြစ်သွားချိန်မှာ ရင်ဘတ်ထဲမှာလည်း ဟာကနဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။
“အား…ဟ… ကလေး.. ကလေး.. လီးကြီး မမ အဖုတ်ထဲ ဝင်သွားပြီ။ ”
“ ဗြွတ်…ဗြွတ်….စွတ်။ ”
“ အ.. အ.. မမကို ကျွန်တော် လိုးနေတာလေ…။”
“အီး အင်း လိုး လိုး… ဆောင့်ပေး… ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်ပေးပါ…. မမ.. ယားလွန်းလို့…။ ”
“ ပြွတ်… ဒုတ်… ဒုတ်… ဖွတ် ။ ”
လီးတစ်ချောင်းလုံး ဝင်နေတာတောင် အောက်ကနေ ကော့ပြီး ပြန်ပြန်ဆောင့်နေတဲ့ ဒေါ်မမလေးရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို လှမ်းကိုင်ပြီး ဒူးတွေ ပွန်းလာတဲ့အထိ ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးရင်း စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို လီးတံ ဝင်တာ ထွက်တာကိုပါ အရသာခံ ကြည့်
မိပါတယ်။ ဂွင်းထုတဲ့ အရသာနဲ့ အခုလို လိုးရတာနဲ့ ဘာမှကို မဆိုင်တာပါ။ ဒေါ်မမလေးကလည်း ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားထားကာ ကျွန်တော် ဆောင့်သမျှကို အောက်ကနေ အော်ပြီး ခံနေပါတယ်။
တရိပ်ရိပ် တက်လာတဲ့ ကာမအရှိန်နဲ့အတူ ကျွန်တော့်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကလည်း ပိုပြီးတော့ မြန်လာပါတယ်။ လီးကို ဆွဲမထုတ်ပဲ ဆောင့်ကြောင့်ပြောင်းထိုင်ကာ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ခါးကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ကိုင်ပြီး အားရပါးရ အရှိန်ပါပါ ဆောင့်တော့ လီးက အထဲကို ပိုဝင်သွားတယ်ထင်တယ်။ ဒေါ်မမလေး မျက်နှာပါ ရှုံ့မဲ့မဲ့ဖြစ်ကာ အော်နေပါတယ်။
“ဒုတ် ဒုတ်.. ဗြစ် ။”
“ အမလေး… အား … ကောင်းလိုက်တာ…. ဆောင့် ဆောင့် ။ ”
“ ဟင်း…ဟား….အင့် ။ ”
“ အ… လီးကြီးဆုံးအောင် ဆောင့်ပေးနော်…. အား… ကောင်းလိုက်တာ…။ ”
“ဒုတ် ဒုတ် ဖွတ်။”
“အား အား ကျွတ်..အား။ ”
“ဆောင့် အ..လိုးပါ….လိုးပေးပါ ကလေးရယ် ။ ”
“အား အား အမလေး …အိုး….။ ”
အော်တာ သိပ်အကျယ်ကြီး မဟုတ်ပေမယ့် တဘက်အခန်းတွေ ကြားမှာကို ကျွန်တော်က စိုးရိမ်နေမိပါသေးတယ်။ ဒေါ်မမလေးကတော့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ ကျွန်တော် ဆောင့်ပေးသမျှကို အပြည့်အဝ ဖီလင်ယူနေပါတယ်။ နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း သူ့ဘာသာ ပွတ်ကာ ကစားနေတာကလည်း ကျွန်တော့်ကို ပိုပြီး သွေးကြွအောင် လုပ်ပြနေသလိုပါပဲ။
ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း ကော့လိုက် ပြန်ချလိုက်
နဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ လီးတံကို ရမ်းခါနေအောင် အောက်ကနေ ကစားပေးပါတယ်။ အဲဒီပုံစံနဲ့ပဲ အားရပါးရ ဆောင့်လိုးရင်း လီးထိပ်မှာ ကျင်ကနဲဖြစ်ကာ တကိုယ်လုံး အကြောတွေ ပြတ်ကျသွားသလို ခံစားလိုက်ရတော့မှ ကျွန်တော် ပြီးသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှာ မသိလောက်အောင် ကျွန်တော်လည်း ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။
သုတ်ရည်တွေကို ဒေါ်မမလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်
ကြီးထဲမှာပဲ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်လိုမှ တောင့်မထားနိုင်တော့ပဲ ဒေါ်မမလေးရဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ်ကို မှောက်ချပြီး မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 13,988
စတေးဟုမ်း အချစ် →